‘मलाई अन्तरजातीय बिहे गर्न मन छ’
‘मलाई अन्तरजातीय बिहे गर्न मन छ’
साझा अनलाईन २०७४ भाद्र २५ गते मा प्रकाशित 191 पटक पढिएको
फरक स्वरका कारण आस्था राउतले छोटो समयमा नेपाली संगीत क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाइन्। उनको पहिलो एल्बम ‘आधार’का दुई गीत ‘झुम्के बुलाकी’ र ‘चौबन्दीमा पटुकी’ निकै रुचाइए। नेपालखबरले आईतबार बिहान–बिहानै टेलिफोन गरेर आस्थाको हिजोआजको दैनिकी बुझ्न खोजेको छ:
अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ?
म तातो पानी पिउँदैछु।
बिहान कति बजे उठ्नुभयो?
अरु दिन ७ बजेतिर उठ्थेँ आज अलि ढिला भयोे। निन्द्रा त पुर्याउनैपर्यो।
मर्निङ वाक गर्थेँ । १५ दिनजति भयो ग्याप भएको। तत्काल अल्छी भइरहेकी छु।
जिम गएर एक्सरसाइज गर्न डर लाग्छ। जीम गएर छाडेपछि मोटाउनेहरु धेरै देखेकी छु। झन म त स्टेज कार्यक्रममा बाहिर कुदिरहनुपर्छ। त्यहीँमाथि खन्चुवा छु। मन लागेको कुरा खाइरहनुपर्छ।
मोटाउनुदेखि डर लाग्छ है?
म त बच्चादेखि नै हट्टाकट्टा मान्छे। अब झन मोटाएँ भने त तनाव भइहाल्छ नि। जे होस् मेरो स्वर, गायन र पर्फमेन्स अनुसार मेरो ज्यान ठिक छ, कुनै समस्या छैन्। मेरा साथीहरु भन्छन्,‘दुब्लो ज्यान मेरो पर्सानिलीटीलाई सहुाउँदैन्।’ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ।
राति कति बजे सुत्नुहुन्छ ?
११–१२ बज्छ। कहिले मुभी, कहिले युट्युब, कहिले फेसबुकमा झुण्डिएर ढिला भइदिन्छ।
हिजोको दिन कस्तो रह्यो त?
हिजो विदाको दिन। ममी ड्याडी सबै घरमै हुनुहुन्थ्यो। फुपु पनि आउनुभएको थियो। घरमै कुराकानी गरेर दिन बित्यो। अरु बेला पनि म घरबाहिर गएँ भने साँझचाँही छिट्टै घर फर्किन्छु। राति ८ बजेभन्दा अगाडी घर आइपुग्नुपर्छ। नत्र कर्फ्यू जारी हुन्छ। मेरो ममी टिचर हुनुहुन्छ। टिचरको छोरी भएपछि अनुशासनमा त बस्नैपर्यो। झन म त बाआमाको एक्लो सन्तान!
नयाँ एल्बमको तयारीमा हुनुहुन्छ हो?
हो। करिब दुई वर्षको होमवर्कपछि मेरो पहिलो एल्बम ‘आधार’को भाग–२ लिएर आउँदैछु। एल्बममा सातवटा गीत हुनेछन्। अघिल्लो एल्बममा मेरो मामुको दुुई गीतमा शब्द थियो, यसपल्ट एउटा गीत लेख्नुभएको छ। संगीत गुरु सुरेश अधिकारीकै छ। त्यस्तै महाराज थापाको एकल एरेन्ज छ।
पहिलेभन्दा के फरक छ?
पहिलेको भन्दा ‘एक लेभल अप’नै गर्ने प्रयास गरेकी छु। गीतमार्फत महिला ससक्तिकरण, वैदेशिक जीवन, आम मान्छेका जीवन सबै समेट्ने कोशिष गरेकी छु। लोक लयमै आधारित रहेर गीतहरु तयार भएको छ।
भनेपछि गीतहरु चेतनामुलक छन्?
मेरो गीतमा चेतना भएन भने त के आस्था राउत?
तपाईले केही दिनअघि राज्यले कलाकारहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै ‘मलाई अकालमा मर्नु छैन’ भन्ने आशयको स्टाटस लेख्नुभयो, कसरी यस्तो सोच मनमा आयो?
अहिले अग्रज संगीतकर्मी पुर्ण गुरुङको किड्नी फेल भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ। बासुदेव मुनाललाई थ्रोट क्यान्सर भएको छ। ओमविक्रम विष्ट पनि बिरामी हुनुहुन्छ। यसरी थुप्रै कलाकार बिरामीको चपेटामा पर्नुभएको छ। तर राज्य मौन छ। राज्य कलाकारलाई गहना भन्छ तर उनीहरुको योगदानको कदर गर्दैन। ठूलो रोग लाग्दा पाँच लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान त छ रे! तर त्यो पाँच लाख पाउन पनि कति पापड बेल्नुपर्ने हो? कहाँ–कहाँ धाउनुपर्ने हो? क–कसको हात जोड्नपर्ने हो? परेको बेलामा राज्यले हेर्दैन भने त्यसको कुनै औचित्य छैन्। पर्दाखेरी मर्दाखेरी सपोर्ट हुँदैन भनेर अरुबेला सम्मान दिएको के काम? बरु दर्शक/श्रोताले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्मान गरिरहेका छन्।
मेरो मनमा यस्तै सोचहरु आएपछि स्टाटस लेखेकी हुँ। यो सासको त के भर छ र? तर यसरी दुःख पाएर मर्नु नपरोस् भन्ने डर लागिरहन्छ। त्यसैले चिन्ता पोखेकी मात्र हुँ।
अर्को कुरा म पनि भूकम्पपीडित हुँ। मेरो दोलखाको पुर्खौली घर पनि भत्क्यो। पूरानो भएकाले बानेश्वरको घर पनि चर्कियो। तर पनि म आफ्नो लागि भन्दा अरुका लागि कार्यक्रम गर्दै हिडेँ। अरु कलाकार पनि यसैगरी लागेँ। डेढ वर्ष यसरी सामाजिक कार्यक्रममै बित्यो। देशका लागि यसरी योगदान पुर्याउने कलाकारलाई राज्यले नसम्झिदा दुःख लाग्दो रहेछ।
बेलाबेला तपाई ‘आफु सिंगल छु’ भन्दै स्टाटस लेखिरहनुहुन्छ । यसो भन्दा तपाईका फ्यानले पत्याउलान्?
अनि आस्था राउत सिंगल हुन पाउँदैन? के मचाँही सिंगल नै मर्नु? हामीलाई माया गर्ने मान्छे चाँहिदैन र? मैले मलाई ज्ञानी केटा, छोरी–चेलीलाई सम्मान गर्ने, सबै जातजात धर्मलाई सम्मान गर्ने, मै हुँ भनेर घमण्ड नगर्ने समझदार र पढेलेखेको केटा चाहियो भन्दा यस्तो त कहाँबाट पाइन्छ भन्छन्। तर मलाई यति त पाइन्छ जस्तो लाग्छ। ज्योतिषले पनि मलाई चिना हेराउँदा राम्रो, पढेलेखेको र मलाई बुझ्ने खालको केटा पाउँछु भनेको छ। तर कहाँ छ त्यो केटा? धेरै ढिला नगर भन्न चाहन्छु। नढाँटी भन्छु, अहिले सम्मचाँही म सिंगल नै छुँ।
तपाईले हालसालै एक कुराकानीमा ‘केटाहरु म्याथमेटिक्स जस्तै लाग्छन्’ भन्नुभएछ?
मलाई सानैदेखि हिसाब भन्नेवित्तिकै पिसाब आउने! अर्थात् एकदमै मन नपर्ने। बुझ्नै गाह्रो लाग्थ्यो। हो त्यस्तै केटाहरु पनि बुझेर बुझिनसक्नु हुन्छन् भन्न खोजेकी हुँ। भित्र एउटा बाहिर अर्कै हुन्छन्।
पहिलोपल्ट कुनै केटा देख्दा सबैभन्दा पहिला तपाईको नजर केमा जान्छ ?
चस्मा लगा’को छ भने त आँखामै जान्छ। तलदेखि माथिसम्म हेरिन्छ। सफा र चिटिक्क परेको सिम्पल केटा मनपर्छ। मेरो बुढा पनि यस्तै होस् र पछि सँगै हिँड्दा अरु कोही केटीले आँखा लगायो भने, ‘हेर, बुढा तिमीलाई कस्तो आँखा लगायो त यार!’ भन्थेँ जस्तो लाग्छ (हाँस्दै)।
सामाजिक संजालमा एक्दमै एक्टिभ र इन्टरेक्टिभ हुने कलाकारमा तपाईको नाम पनि आउँछ, है ?
म काठमाडौंबाहिर जाँदाचाँही एक्टिभ हुँदिन। यहाँ भएका बेला चलाइरहेकै हुन्छ। आफूमात्र बकबक गरेको मनपर्दैन त्यसैले अरुका कुरा पनि पढ्छु र रिप्लाई गर्छु। अरुका स्टाटसमा कमेन्ट पनि गर्छु। तर पछिल्लो समय हामीकहाँ जातिवाद धेरै भयो। यस्ता कुराले चित्त दुख्छ। विभेदका कुरा आयो भने मनपर्दैन। खोइ किन हो, मलाई त अन्तरजातिय बिहे गर्न मन छ। बच्चाहरु पनि ट्यालेन्ट र क्युट हुन्छ रे!
‘६क्का पञ्जा–२’को गीत ‘म त यता किनारामा’मा हरिवंश आचार्यसँग तपाईको स्वर छ। तर तपाईले फिल्मका लागि आफ्नो स्वर सुट नगरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि?
मलाई मेरो कमजोरी अरुले औँल्याइदिनुअघि आफै भन्दिन रुचाउँछु। खासमा त्यो गीत ‘६क्का पञ्जा–२’का लागि भनेर रेकर्ड गरिएको थिएन। डेढवर्ष अघि नै रेकर्ड भएको थियो। सय रुपैैयाँमा विद्यार्थी पढाउने स्कुल चलाउँदै आउनुभएका उत्तम संजेलले त्यो गीत लेख्नुभएको थियो। महजोडीलाई गीत गाउन लगाउने उहाँको चाहना रहेछ। महजोडीले त्यो गीत मलाई फिट हुन्छ भनेर मलाई रोज्नुभएको रहेछ। हरिवंश दाईसँग गीत गाउन पाउनु मेरो अहोभाग्य थियो। पछि त्यही गीत फिल्ममा राखिएको हो। हरिवंश दाईको सम्मानमा उहाँहरु(फिल्मको टिम)ले त्यो गीत राख्नुभएको हुनसक्छ। फिल्मका लागि भनेर नगाइएकाले स्वर सुट नगरेको महसुस भएको हो।
तपाईलाई यो मनोरञ्जन क्षेत्रको के कुराले चित्त दुख्छ?
केही कुरा त अघि नै भनिसकेँ। आस्थाले स्टेज कार्यक्रमबाट दुई–चार करोड कमाइ भनेर नचाहिँदो हल्ला फैलाउँदा चित्त दुख्छ। करोड त के आधा पनि कमाएको छैन। म पैसा कमाउन यो क्षेत्रमा आएको पनि होइन। मेरो बुबा हरिबहादुर राउत वरिष्ठ लोक गायक। म पनि उहाँको बिडो थाम्न खोज्दैछु। मेरा ममी ड्याडीलाई सुःखले राख्न सकुँ, खानलाउन दिन सकुँ, मलाई यत्ति भए पुग्छ। करौँडो गाडी चढेर हिड्ने सोख मलाई छैन्।
आजको प्लान के छ त?
आज मेरो पाँचौ गीतको रेकर्डिङ छ। त्यसमै व्यस्त हुन्छु। दसैँअघि अन्य दुई गीतको रेकर्ड पनि सक्ने तयारीमा छुँ।
२०७४ भाद्र २५ गते मा प्रकाशित
आज पनी यहां निवास गर्दछन् भगवान हनुमान
वैज्ञानिक प्रयोगहरू मुसामाथि नै किन गरिन्छ ?
मर्‍यो दुनियाकै बुढो गोरिल्ला
जापान र चीनबीचको तनाव मत्थर पार्ने यी जापानी पोर्नस्टार
सम्भोगपछि किन आत्महत्या गर्छ भाले माकुरो ?
यी पाँच तरिकाले एकदम छिट्टो चार्ज हुन्छ मोबाइल
बच्चा सँगसँगै बढ्छ यो लुगा, यस्ता छन् अन्य विशेषता
‘अटेरी’ श्रीमतीलाई ठिक पार्न पंजाबबाट आमाबुवालाई अमेरिका बोलाउँदा...